Sida loo koro yaanyo "Yamal": shuruucda beeraha iyo daryeelka
Waxaa ka mid ah noocyada yaanyada ee diyaar u ah beerta furan, "Yamal" waxay qaadataa mid ka mid ah jagooyinka koowaad. Waxa uu ku faraxsan yahay inuu abuuro labada bilowga ah iyo bannaanka u khibrad leh. Iyo mid kasta oo ka mid ah gacmaha, wuu si fiican u dhaqmaa, siisid sarey sare. Ma taqaanaa? Tamaandhada waxay u timid dhulkeennadeena kaymaha roobka ee South America.
Yaanyo "Barefoot Bear": wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato beerashada iyo daryeelka
Dhammaan bannaanka u jecel yihiin noocyo leh miro waaweyn, fareeshka - sida yaanyo cusub "Bruin Bear". Miro-qalooca-qaabeeya ma aha oo kaliya muuqaal qurux badan, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin dhadhan weyn iyo content sare ee walxaha caafimaad leh. Noocyo kala duwan oo tamaandho ah "Dabaysha Bear
Waxaan ogaannaa waxyaabo yaanyo ah "Sierra'an hore"
Ma aha noocyo kala duwan oo tamaandho ah oo awood u leh inuu koro oo si wanaagsan u miro dhaliyo cimilada qabow; sidoo kale, dhulalkaas, dhirta waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah, waa inay leeyihiin tayooyin gaar ah. Mid ka mid ah dhirta - yaanyo "Sierra'an hore." Taariikhda yaanyo sii kordhaya "Siberian hore" Saldhigga quudinta qudaar ee Siberian, kaas oo ku hawlan xulashada iyo raadinta noocyo cusub oo dhirta laga beero, sannadkii 1959, adoo goynaya, noocyo cusub oo qabow u adkaysta oo yaanyo ah ayaa la helay - "Siberian goor hore".
Had iyo jeer way ku fiicantahay inaad soo gurato miraha beerta, taas oo aan ku beeray sidii farcan gurigeyga ka dib, ka dib, markii ugu horeysay ee kuleylka kuleylaha, waxaan ku beeray hawo cusub, oo la waraabiyey, la jecel yahay, la quudiyey, iyo bacrimiyey. Beer weyn oo tamaandhaysan oo qurux badan oo dhadhan fiican leh ayaa ah riyadii beert kasta oo kasta. Maanta, miraha kuwan waxaa la cuni karaa mid cusub, berrito - si loo xiro ilaalinta iyo casiirka tamaandhiga, iyaga oo naftooda siinaya waxyaabo waxtar leh ee jiilaalka oo dhan.
Sida loo koro yaanyada "Hoodka Bannaanka Bisha Cas"
Bannaanka u badan ee raadinta yaanyada bislaado ee hore "Hood Riding Little" ayaa si taxaddar leh ugu fiirsan magaca wayn "Rotkapfen", oo laga helay boorsooyinka miraha. Dhab ahaantii, tani waa nooc ka mida jarmalka ee kala duwan ee nooca ugu jecel. Waa maxay qarsoodiga ah ee caansaanka, sidee ayuu uga duwan yahay dhiggiisa gudaha, iyo sida loo abuuro yaanyadaas oo aad ku aragtid qorshahaaga - tan ayaa laga sii wadahadli doonaa.
Sida loo koro yaanyo "buuxinta cad"
Ereyada "Filling White" dadka intooda badan waxay la wadaagaan magaca tufaaxa, oo kaliya beeralayda khibrad leh waxay ogtahay in tani ay sidoo kale tahay noocyo kala duwan oo yaryar oo yaanyo ah. Iyo inkasta oo ayan u muuqan mid si khaas ah u jilicsan, yaanyo Caddaan ah wuxuu leeyahay tiro astaamo ah oo u qalma dareenka. Taariikhda xulashada tamaandhada "Filling White" Noocyo kala duwan oo tamaandho ah "Filling White" ayaa lagu soo gooyey dalka Kazakhstan sanadkii 1979-kii, waana natiijada ka dhalatay shaqada xanuunka ee geedaha xayawaanka ee saldhigga qudaarta ee tijaabada ah ee hoos imaanaya Professor Edelstein.
Kala duwan yaanyo "Aelita Sanka": sharaxaadda iyo xeerarka beerista
Fasalka ugu horreeya ee yaanyada ee "Sanka" waa mid aad u caan ah beerta, inta badan waa suurtogal in la maqlo oo akhriyo dib u eegis wanaagsan oo ku saabsan. Qodobkan waxaan eegeynaa yaanyada kala duwan ee "Sanka" kala duwan, sifooyinka, hababka beerista iyo sida ay uga fiican tahay noocyo kale. Taariikhda ka saarista yaanyada "Sanka" Tani noocyo kala duwan oo tamaandho ah ayaa loo keenay NIITSSSA breeder Y.
Sida loo koro yaanyada "Golden Heart": shuruucda beeritaanka geedo iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Bannaanka u badan ayaa doorbidaya beerista yaanyada. Noocyo kala duwan oo cagaaran ayaa caan ku ah dhalidooda iyo dhadhanka sare. Maqaalkan waxaa loo tixgelin doonaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee yaanyo leh magac qurux badan "Golden Heart". Tomato "Golden Heart": sharaxaadda noocyada kala duwan Si aad u barato kala duwanaanshahan asalka ah sida ugu wanaagsan ee aad awooddo, waa inaad tixraacdaa sharaxaadda faahfaahsan ee kala duwan ee yaanyada "Golden Heart".
Sida loo koro yaanyada "Spasskaya Tower" on sariirta guriga ee guriga
Dad badan oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga waxay u kobcaan yaanyada dhulkooda, sababtoo ah iyada oo aan khudraddan laga helin way adag tahay in la qiyaaso miiska xagaaga. Laakiin ka mid ah noocyada kala duwan ee tamaandhada yaryar waxaa mararka qaar sahlan in la helo wareersan, gaar ahaan maadaama ay jilciyayaashu ma fadhiisan karaan, sanad walba oo bixiya macaamiisha cusub iyo Beelaha cusub. Mid ka mid ah munaasabadaha noocan oo kale ah waa yaanyada Spasskaya Tower F1, dabeecadaha la caddeeyay ee u muuqda inay jilicsan yihiin inaysan ku fillaaci karin inay soo jiitaan dareenka xitaa kuwa ugu naxariista badan ee noocyo yaanyo ah oo caan ah.
Tamaandho "Verlioka": sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan iyo beerista agrotechnology
Cuntada yaanyada cas ee noocyada kala duwan ee "Verlioka" ayaa si fiican ugu tartamaya dhalidda, dhadhanka iyo fudaydka daryeel ee leh Beelaha kale ee hore u koraya. Xaqiiqada ah in yaanyo kuwan yihiin, sida ay u kala duwan yihiin, sida ay u koraan, waa maxay bannaanka u sheega iyaga ku saabsan, waxaa laga wada hadli doonaa dheeraad ah. Tamaandhiga "Verlioka": sifooyinka iyo sharaxaadda noocyada kala duwan Geedka ayaa waxaa loo adeegsaday beeraha Ruush ee beerista beeraha iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Inta badan bannaanka u khibrad badan oo ay yaqaanaan kala duwan ee yaanyo "Cardinal". Kala duwanaanshuhu waa mid aan qabyo ahayn oo daryeel ahna wuxuu bixiyaa dalag goosad ah. Maantana waxaan ka hadli doonaa beeritaanka geedo iyo qaadashada dhulka furan, iyo sidoo kale kala hadal shuruucda daryeelka iyo ilaalinta cudurrada iyo cayayaanka. Calaamadaha iyo sharaxaadda noocyada kala duwan Haatan wax yar ka hadal wax ku saabsan Yaansiirka Cardinal, oo ah, sharaxaada iyo astaamaha noocyada kala duwan.
Sida loo koro yaanyada "Verlioka Plus" ee sariiraha beerta guriga
Aad u caan ah ee bannaanka u yihiin kala duwan ee yaanyo "Verlioka Plus". Yaanyada waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan oo aan qabyo ahayn sii kordhaya. In this article waxaan ku tilmaami doonaa sida loo koro yaanyo ah "Verlioka Plus" oo sharaxaad ka bixi. "Verlioka Plus": taariikhda taranka taranka Marka la beerto geedkaas, kala duwanaanta Verlioka waxaa loo qaaday saldhigga.
Sida loo doorto yaanyada sii kordhaya?
Noocyo iyo Beelaha yaanyada waa mid kala duwan. Khudradda cagaaran oo kasta waxay qaadi kartaa beeritaanka iyadoo loo eegayo dhadhankiisa - qaar waxay door bidaan miraha waaweyn, fawaakihda, kuwa kale sida miraha yar yar iyo kuwo macaan, qofna waxaa lagu qasbay inuu doorto nooca xaaladaha cimilada ee gobolka. Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo doorto yaanyada beerashada aqalka dhirta lagu koriyo ama beerta furan, kuwaas oo ah noocyada ugu caansan oo dhadhan fiican leh.
Noocyada Noocyada iyo xeerarka yaanyada sii kordhaya "Red Red"
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo yaanyo ah. Dadka ugu caansan waxay yihiin noocyada Casaanka ee Red Bee F1. Waxaan bixinaa si aad u ogaato sifooyinka tamaandhooyinkan, xeerarka beerahooda iyo beerahooda. Tilmaanta iyo sifooyinka noocyada kala duwan Kala duwan ee yaanyada "Red-Red F1" waa wakiil hor leh oo koraya, iskudhaf dhexdhexaad ah oo ka tirsan jiilka kowaad.
Tilmaanta iyo koboca yaanyada "Volgograd"
"Volgograd" yaanyo waa kuwo weyn oo loogu talagalay dadka degaanka xagaaga kuwaas oo aan caadaysteen in ay waqti badan ku qaataan beertooda. Kala duwanaantani ma aha mid picky ah mana u baahan tahay dayactir taxaddar leh. Waxaa lagu gartaa dhalid wanaagsan iyo dhadhan fiican. Tilmaamo iyo noocyo Tamaandho "Volgograd" ayaa loo qaybiyaa noocyada soo socda: "Volgograd pink"; "Volgograd - 323"; "Volgograd 5/95".
Pink Paradise Jinka hybrid: faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka yaanyo
Hadda, noocyada yaanyo jilicsan ee jilicsan ee horayba u ahaa waddankeenna ayaa lagu soo raray Japan. Dheefaheeda iyo sifooyinka tayada leh waxay keeneen kor u kaca iibka iyo baahida wanaagsan ee abuurka. Akhriso hoosta ku saabsan sida loo gaaro dhalidda ugu badan ee leh dayactir sahlan. Qeexitaanka dhowaan lagu soo qaatay Japan - sannadkii 2009 - Yaanyada Jannaha Cagaarka ah waxay sii wadaan inay si dhaqso ah u soo galaan oo ay horeba dalab weyn ugu yeeshaan gobolka.
Sare u-weyn iyo weyn-fruited: faa'iidooyinka ah ee yaanyo sii kordhaya "Miracle of the Earth"
Breeders sanad walba waxay abuuraan noocyo cusub iyo Beelaha yaanyada, oo lagu gartaa difaac sare ee cudurada, adkaysi u noocyo kala duwan oo dabiiciga ah iyo bannaanka u ogolaanaya goosashada hodan ah iyo dhadhan. Waxaa ka mid ah hantida tamaacada ah iyo sawirro run ah oo ka soo jeeda beeralayda khudaarta sanado badan.
Samar noocyo yaryar oo hore u bislaaday
Ka mid ah noocyo badan oo kala duwan ee yaanyada, xulashada ugu wanaagsan ee lagu koriyo waxaa ka mid ah Samara F1. Beerta iyo daryeelka sii kordhaya ee yaanyada noocaan oo kale ah kama qaadan doono tamar badan oo kaa fog, iyo natiijada shaqada oo dhan, miraha dhadhan fiican leh iyo dhirta saxda ah waxay noqon doontaa miiska. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa si aad isugu dhow oo aad ku ogaaneysid sharaxaadda kala duwan, iyo sidoo kale inaad barato waxyaabaha ku saabsan abuurista beertaada.
Tamaandho badan ayaa qiimeeyay beeralayda qiimaha nafaqada iyo waxsoosaar sare. Sannado badan, dadka jilicsan ayaa ku dhibtooday inay soo saaraan noocyo khaas ah oo tamaandho ah, taas oo lahaan lahayd qiyaas yar, taasoo si sahlan u fududeyn doonta gaadiidkooda iyo ururinta, iyo sidoo kale si sahlan koray guriga, iyadoo la ilaalinayo sifooyinka organoleptic ee qaraabadooda waaweyn.
Tamaandhada maanta waa marti soo dhaweeyayaasha jikada oo dhan, sababtoo ah maaha oo kaliya saladh, laakiin qasacadeysan iyo xitaa la dubay suxuunta ay jecel yihiin. Nasiib wanaag, tarbiyadu waxay sameeyeen intii ugu fiicneyd, iyo adduunka casriga ah way fududahay in la helo noocyada ugu haboon ee miro yaanyada kiis kasta. Tusaale ahaan, kuwa ku beeray noocyada kala duwan ee "Gigolo" waxay ka hadlaan kala duwanaanshaha qaabka codsiga, maadaama ay ku habboon tahay ujeedooyin kala duwan.